TALATA 25 FEBROARY 2020
FANAFIHANA TAO ANTSAHABINGO : Ireo mpiasa ihany no voatondro ho nanao hevi-petsy nandroba ny orinasa
Ny alarobia hariva teo no natolotra ny fampanoavana ihany koa ireo roalahy mpividy halatra ka dia naiditra am-ponja vonjimaika avy hatrany. 14 février 2020
Tsiahivina fa herinandro talohan’io dia nilaza ireo mpiasa amin’ny orinasa iray eny Antsahabingo fa nisy valo lahy nanafika ka lasa tamin’izany ny entana maro fiasana ao amin’ ity orinasa ity ihany. Nambaran’ izy ireo fa nitam-piadiana ireo jiolahy tamin’izany, ka nandrahona azy ireo ny mbola hiverina. Nidina ifotony avy hatrany moa ny mpitandro filaminana rehefa nahazo antso vonjy. Efa nadio kosa ny rano nitan’ireo olon-dratsy.
Ny famotorana nataon’ny mpitandro filaminana kosa dia nahitana fa tsy nisy mpanafika akory tao amin’ity toeram-piasana ity fa ireo mpiasa tao ihany no nikononkonona ny halatra. Izy ireo nivarotra ny entana halatra no nahasarona azy ireo. Voaporofo tamin’izany ny fandraisana andraikitr’izy rehetra satria dia mbola tratra ny fifanakalozana tamin’ny alalan’ny finday nisy teo amin’izy ireo. Tratra tany amin’ireo mpividy halatra koa ny entana sasany, ka nosamborina avy hatrany izy ireo.
Efa nampitandrina rahateo ny kaomisera santraly ny amin’ny tokony hijerena tsara ny entana hovidiana sy ny hitakiana ny taratasy momba azy, ary nambarany tamin’izany fa mitovy ihany ny sazy ho an’ny mpangalatra sy mpividy halatra. Ny talata no efa nampidirina vonjimaika ao amin’ny fonjan’i Marofoto ireo mpangalatra. Any izy ireo no miandry ny fotoam-pitsarana azy.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68231) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (646) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (391) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (175) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (84) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (77) 21 février 2020